Yakachipa yeICE Chitikiti Matikiti Uye Kufamba Maitiro Ekubhadhara Mitengo | Save A Train
Iwe uchawana chinopa chakanakisa cheICE matikiti echitima muEurope pane yedu webhusaiti, Save A Train. Isu tine chikuru chinopihwa chematiketi echitima muEurope nepasi rose. Nekubatana kwedu kune vasingaverengeke vevashandi vezvitima uye nemaitiro ekurudyi, isu tinokupa iwe yakachipa ICE matikiti aunogona kuwana. wo, tinowana dzimwe nzira dzinodhura dzezvitima kunze kweICE.
Kusiyana nezvimwe zvitima nezvitiketi zvemakomendi akasiyana (standard, bhizimisi, mukuru, etc.) sezvakaita muTrenitalia, ICE yeGerman yakati siyanei. Kune makirasi maviri mune yega yeCE chitima - yekutanga kirasi uye yechipiri kirasi. Misiyano mikuru pakati pezvikamu zviviri ndiwo mutengo, kuchinjika, uye masevhisi anopihwa.
Makosi eChipiri echikamu haana kure kubva kuKirasi yekutanga mukunyaradza. Pamusoro pe, zvigaro mukamuri yechipiri-kirasi zviri nani pane avhareji zvigaro zveairline. Plus, ivo ergonomic, huya nemusoro, uye yakafukidzwa mumucheka wakagadzirwa. Izvi zvinoita kuti rwendo rurefu rakareba rurefu.
chaizvo, kune yakanaka kwazvo zvinoshamisa botanic magadheni, maresitorendi ane hupamhi hwemhando yepamusoro yezvipfeko zveonoono, zoos, mamiziyamu, uye pubs kunakidzwa. wo, kana usina chokwadi chekuti chiteshi chani chauchasarudza, algorithm yedu ichakubatsira kusarudza.